PSJTV | सर्जियो बुस्केट्स फ्रम नेपाल
'तपाईंलाई त धेरैले सर्जियो बुस्केट्ससंग दाँजेर हेर्छन् नि।' उनी सधैंजसो सहज र सरल रुपमा प्रस्तुत हुन्छन्, 'यस्तो सुन्दा खुशीनै लाग्छ। आफुले आफैंलाई प्रमाणित गर्ने प्रयासमा कसैले यस्तो अप्रिसिएसन दिंदा मज्जा लाग्छ।'
मङ्गलबार, १५ साउन २०७५ बच्चु हिमांशु
उनी यतिबेला विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीहरुमध्ये एक हुन्। मेस्सी र रोनाल्डोमात्रै चिन्नेहरुका लागि यो नाम नौलो हुनसक्छ। तर फुटबल फलो गर्नेहरुका लागि यो चीरपरिचित नाम हो। उनी स्पेनका खेलाडी हुन् र व्यवसायिक रुपमा बार्सिलोनाबाट खेल्ने गर्छन्। धेरै खेल पण्डितहरुका लागि उनी विश्वकै सर्वोत्कृष्ट डिफेन्सिभ मिडफिल्डर हुन्।
नेपालमा पनि यस्तै प्रकृतिका एक खेलाडी छन्। सतही रुपमा नेपाली फुटबल बुझ्नेहरुले यिनलाई नचिन्न सक्छन्। तर नेपाली फुटबलमा भिजेकाहरुलाई यो नाम नौलोभने होइन। बुस्केट्सजस्तै यी खेलाडीपनि आफ्नो खेलजीवनभर छायाँमै रहे तर उत्कृष्ट खेलभने खेलिरहे। ती खेलाडी जसले आफ्नो खेलजीवनभर उत्कृष्ट फुटबल खेलेरपनि उति चर्चा बटुल्न सकेनन्, उनी हुन् राजेन्द्र रावल।
६ फिट उचाई। हट्टाकट्टा ज्यान, हेर्दै खेलाडीजस्तो!
नेपाली फुटबलमा डिफेन्सिभ मिडफिल्डका पर्याय हुन् राजेन्द्र रावल। नेपाल एपिएफबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्ने रावल आफ्नो क्लबका लागि जति महत्वपूर्ण छन्, त्यतिकै महत्वभने उनलाई राष्ट्रिय टिमले दिन चाहेन। यद्यपि, नेपाली राष्ट्रिय टिमको परिप्रेक्ष्यमा उनी एकमात्र यस्ता खेलाडी हुन् जो सदा एउटा पोजिसनका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनसक्थे। त्यो हो, डिफेन्सिभ मिडफिल्ड। नेपाली फुटबलले डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको परिभाषा राम्रोसंग बुझ्न नपाउँदै राजेन्द्र रावलको उदय भयो। उनको राष्ट्रिय टिमको करियर यसैको मारमा परिरह्यो।
डिफेन्स र एट्याकलाई जोड्ने मेरुदण्डका रुपमा डिफेन्सिभ मिडफिल्डलाई लिइन्छ। आफ्नो डिफेन्सलाइनमा विपक्षीको बल आइपुग्नुअगावै त्यसलाई खोसेर आक्रमण निस्तेज पार्नु र फ्रन्टलाइनका खेलाडीलाई उपयुक्त पास दिनु एउटा डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको भूमिका हो। यो पोजिसन हेर्दा जति सामान्य छ, खेल्दा उतिनै कठिनपनि छ। यसैको परिणाम हो, विश्वमा थोरैमात्र खेलाडीहरु डिफेन्सिभ मिडफिल्डमा चम्किन्छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण के हुनसक्छभने, स्पेनका सर्जियो बुस्केट्स राष्ट्रिय टिमबाट लगातार दश वर्षदेखि निर्विवाद यो पोजिसनमा खेलिरहेका छन्। र उनलाई विस्थापित गर्ने उपयुक्त पात्र स्पेनले आजसम्म भेटेको छैन। यही कुरा बार्सिलोनामा पनि लागु भइरहेको छ। बुस्केट्सको ठाउँमा खेल्ने अर्को उस्तै खेलाडी बार्सिलोनाले आजसम्म पाउन सकेको छैन।
हुन त बुस्केट्स र रावलमा आकाश-जमिनको फरक छ। बुस्केट्स विश्वकै उत्कृष्ट लिग लालिगामा खेल्छन् र रावलभने लिगनै सञ्चालन हुन नसकेको नेपाली घरेलु फुटबलमा। तर यी दुई खेलाडीमा अनेक समानताहरु छन्। कठिन मानिने डिफेन्सिभ मिडफिल्डको पोजिसनमा खेल्नु यी दुईको प्रमुख समानता हो। बुस्केट्स एकदमै भद्र स्वभावका छन् र बढीभन्दा बढी छोटो पास खेल्न रुचाउँछन्। त्यस्तै, रावललाई नेपाली फुटबलकै सबैभन्दा अनुशासित खेलाडी भनेमा फरक पर्दैन। उनीपनि छोटा पासहरु खेलेर डिफेन्सलाई मिडफिल्डसंग जोड्न माहिर छन्। तर यी दुवैको अर्को ठूलो समानता के होभने, उत्कृष्ट खेलाडी हुनका बावजूद पाउनुपर्ने चर्चाभने यिनले कहिल्यै पाएनन्।
राजेन्द्र रावल, जून २८ १९८६ मा अछाममा जन्मिए तर उनले आफ्नो किशोरावस्थाभने नेपालगञ्जमा बिताए। उनी सुरुमा क्रिकेटका राम्रा खेलाडी थिए। नेपालगञ्ज तराईमा पर्ने भएकाले त्यहाँ फुटबलभन्दा क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय थियो। स्वभावत: उनी क्रिकेटमै लागे र आफ्नो स्कूल टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न प्रतियोगिताहरु खेले। तर नेपालगञ्जमा भएको पहिलो खुकुरी गोल्डकपपछि उनको खेलजीवनले एउटा नयाँ मोड लियो। उनी किशोरावस्थामा भर्खरभर्खर प्रवेश गर्दैथिए त्यतिबेला। खुकुरी गोल्डकपमा नेपालको चर्चित क्लब संकटा र स्थानीय क्लबबीच म्याच हुने भयो। टिकटदर रु दश तोकिएको थियो। तर विचरा रावलले त्यतिपनि कहाँ तिर्नसक्नु! अनि खेलमैदान छेउको कभर्डहलमा उक्लिए र छतबाट त्यो खेल हेरे। त्यही खेलमा उनले देख्न पाए, तत्कालिन नेपाली फुटबलको एक चर्चित नाम राजकुमार घिसिङलाई, जो संकटाबाट खेलिरहेका थिए। अनि त के चाहियो र, उनी त्यो खेलबाट यति प्रभावित भएकि उनले क्रिकेट खेल्न चटक्कै छोडिदिए। अबउप्रान्त फुटबल खेल्ने निधो गरिसक्दा रावल १४ वर्ष पुगिसकेका थिए।
१४ वर्षको उमेरमा बल्ल फुटबल हान्न सिकिरहेका रावलले यो खबर पाएकि, नेपालगञ्जमा एन्फाको छनौट हुँदैछ। लहैलहैमा लागेर आफुले लाएको सर्ट र पाइन्टमै उनी छनौटमा सहभागी भए। छनौट हुने त दुर कुरा, जम्मा १२१ खेलाडीमा उनी पहिलो नम्बरमै फ्याँकिए। तरपनि फुटबल खेल्नभने छोडेनन्। कक्षा दशसम्म आउँदा पेलेको जीवनीले अझ फुटबलमै लाग्न उनलाई प्रेरित गर्यो। तर उनको खेलभने त्यति राम्रो थिएन। प्रयास गर्दैरहे र विस्तारै उनलाई नेपालगञ्जमा राम्रो खेलाडीको रुपमा चिनिन थालियो। यही क्रममा नगरपालिका कप खेल्न नेपालगञ्जको टिमबाट उनी काठमाडौं आए। ठिमी नगरपालिकासंग भिडेको नेपालगञ्जले दश गोलको लज्जास्पद पराजय बेहोर्यो। दशरथ रंगशालाको फ्लडलाइटमा राति खेलाइएको खेलमा ठिमीको तर्फबाट उपेन्द्रमान सिंह, प्रदिप महर्जन र सन्दीप राईजस्ता उत्कृष्ट खेलाडीहरु मैदानमा उत्रेका थिए। उनले त्यस खेलमा फुटबलरको स्टारडमपनि अनुभव गर्न पाए। त्यो खेलपछि उनले नेपालगञ्ज र काठमाडौंबीच खेलस्तरमा कतिको भिन्नता रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमै बुझे। यतिन्जेल उनले कक्षा दशपनि पास गरिसकेका थिए र फुटबल खेलेरै केही बन्ने निधो गरिसकेका थिए। तर काठमाडौं गएर केही नहुने देखेपछि उनी आफुलाई निखार्न कक्षा १२ सकुन्जेल नेपालगञ्जमै रहे र निरन्तर फुटबल खेलिरहे।
रावल सानैदेखि पढाइमा अब्बल थिए। उनको परिवार उनलाई इन्जिनियर भएको हेर्न चाहन्थ्यो। १२ सकाएपछि परिवारले उनलाई काठमाडौं पठायो। तर रावलको नियतभने अर्कै थियो। उनी जसरीपनि फुटबलमै स्थापित हुन चाहन्थे। इन्जिनियरिङ पढ्न भनेर काठमाडौं छिरेका रावल अब खुलेर फुटबलमा लागे। काठमाडौं बस्ने एकजना मामाको छोराको चिनजान पुलिस टिमसंग राम्रो थियो। रावलले उनलाई बिन्ती चढाए र जसरीपनि पुलिस क्लबमा ट्रेनिङ मिलाइदिन अरुरोध गरे। नभन्दै उनले पुलिस क्लबमा अवसरपनि पाए र पछि क्लबले उनलाई जागिरपनि दियो। तर देश द्वन्दको उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा पारिवारिक सुरक्षामा असर पुग्ने देखेर तीन महिनामै रावलले पुलिस क्लब छोडे।
रावल नियमत रुपमा टुँडिखेल जान्थे र आफैं अभ्यास गर्थे। त्यहींनेर संकटाबाट खेलिरहेका गोलकिपर संगीत रजकले उनलाई भेटे र संकटा आउन अनुरोध गरे। संकटाबाट खेल्ने निधो गरेका रावलको फुटबल करियरमा तब तुवालो लाग्यो, जब तीन वर्षसम्म लिग बन्द भयो। त्योबीच उनको खेलमा कुनै सुधार आएन र तीन वर्षपछि खेलिएको लिगमा संकटा ए डिभिजनबाट रेलिगेट भयो। त्यसपछि एपिएफले नयाँ खेलाडीहरु लिन लागिरहेको सुनेर उनी त्यतातिर लागे। ८० जनाजति भिडेको सो छनौटमा उनलाई एपिएफले छान्यो। तर सिक्किमको खेलपछि मात्रै कसकसलाई राख्ने भन्ने कुरा निधो गरिने भयो। सिक्किमको खेलपछि रावल एपिएफको नियमित खेलाडी भए। तत्कालिन कप्तान तथा प्रशिक्षक कुमार थापाले रावलको खेल सुधार गर्न भरपुर मदत गरे। तर एपिएफबाट खेलेको पहिलो लिग ठिकठाकमात्रै रह्यो। त्यसलगत्तै छ महिना लामो इन्जुरीमा रावल फसे। लामो समय मैदानबाहिर रहेर खेलमा फर्के तर फेरि पहिलो खेलमै घाइते भएर चार महिनाका लागि बाहिरिए। त्यसपछि एपिएफले उनलाई नराख्ने हल्ला चल्न थाल्यो। प्रशिक्षक कुमार थापाले तत्कालिन डिएसपी प्रेम श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेपछि रावलको अबका केही खेल हेरेरमात्रै राख्नेनराख्ने निर्णय गरिने भयो। त्यसपछि आफुलाई प्रमाणित गर्न लागिपरेका रावलले सुदुरपश्चिममा भएको राष्ट्रिय खेलकुदबाट आफ्नो क्षमता शिद्ध गरे। अहिले सम्झिंदा, आफ्नो माटोले उनलाई चिनेको ठान्छन् रावल। त्यसपछि लगातार राम्रो प्रदर्शन गर्दै टिमलाई राम्रा नतिजाहरु दिलाइरहे। यो बीचमा ब्रिटिश गोर्खाकपमा मछिन्द्रविरुद्ध खेलिएको खेल उनको जीवनकै उत्कृष्ट खेलका रुपमा सम्झिन्छन् रावल। त्यसपछिको लिगमा पनि उत्कृष्ट खेल खेलेर उनले आफुलाई प्रमाणित गरेर देखाए। यतिन्जेल रावल एपिएफमा महत्वपूर्ण खेलाडीको रुपमा स्थापित भइसकेका थिए।
अबभने रावल राष्ट्रिय टिमको पनि नजरमा पर्न थाले। एएफसी च्यालेन्ज कपको छनौटका लागि प्रशिक्षक ज्याक स्टेफानोस्कीले उनलाई बोलाए। पहिलोपटक भएकाले रावलको लक्ष्य ३० जनाभित्र पर्नु थियो। तर ज्याकले उनलाई यति मन पराएकि उनी पहिलोपटकमै राष्ट्रिय टिममा तानिए। छनौटपछि पाकिस्तानविरुद्धको दुवै मैत्रीपूर्ण खेलमा अवसर पाए। च्यालेन्ज कपपछि उनको खेलले अझ उत्कृष्ट आयामहरु थप्दै गयो। उनले एनसेल कपमा डिफेन्सिभ मिडफिल्डर भएरपनि पाँच गोल गरे। कृष्ण थापाको नेतत्वमा रहेको एपिएफबाट आफ्नो करियरकै उत्कृष्ट लिग खेले र पाँच गोल गरे। उनी लिगभर प्रत्येक खेल खेल्ने थोरै खेलाडीमध्ये एक थिए। फलस्वरुप एपिएफ राष्ट्रिय लिगका लागिपनि छानियो। त्यसमा पनि उनको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो। राष्ट्रिय टिममा पनि प्रशिक्षक प्याट्रिक एसुएम्सले उनलाई लिए। जापानिज कोच ग्योकोतु कोजीका लागि त रावल सर्वथा प्रिय खेलाडी हुन्। पछिल्लोपटक नेपालले सोलिडारिटी कप जित्दापनि रावल टिममा थिए। तर हालै सम्पन्न झापा गोल्डकपमा थ्रिस्टारविरुद्ध खेल्दा घाइते भएदेखि रावल यतिबेला खेलमैदानबाहिर छन्।
खेलजीवनको अन्तिम अध्यायमा आफुलाई प्रमाणित गर्ने ध्येयले यतिबेला हरेक दिन फिजियो गरिरहेका रावल अब हुने लिगका लागि फिट हुने तयारीमा छन्। उनलाई अझैपनि राष्ट्रिय टिममा परिन्छ भन्नेमा उत्तिकै विश्वास छ। अब केही वर्ष उत्कृष्ट फुटबल खेलेर आफ्नो खेलजीवनको सुखद अन्त्य गर्ने उनको मनशाय छ।
विश्व फुटबलको बारेमा पनि रावल पूर्ण रुपमा जानकार छन्। हरेक खेललाई सही विश्लेषण गर्नसक्ने असाधारण प्रतिभा उनमा छ। रावलको फेवरिट खेलाडीभने क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुन् र उनले फलो गर्ने क्लब रियल म्याड्रिड हो। उनी रोनाल्डो र आफुमा धेरैहद समानता रहेको ठान्छन्। भन्छन्, 'मजस्तै रोनाल्डोपनि सेल्फमेड खेलाडी हो।'
'मेस्सी र रोनाल्डोमा को उत्कृष्ट त?'
यो प्रश्नको बडो कुटनीतिक जवाफ छ रावलसंग।
'मेस्सी गडगिफ्टेड होभने रोनाल्डो सेल्फमेड। यी दुईबीच को उत्कृष्ट हुन् भन्नेमा विवाद गरिरहनु जरुरी छैन। भगवानले हामीलाई यो बुझाउन चाहेका छन् कि मान्छेले कि त जन्मिंदै आफ्नो नाम लिएर आउँछ, कि त कडा परिश्रमले आफ्नो नाम बनाउँछ।' उनको यस्तो जवाफ व्यवहारिकपनि लाग्छ।
राष्ट्रिय टिममा लगातार परेरपनि जम्मा ४ क्यापमात्रै जितेकोमा रावललाई बेलाबेला खल्लो लाग्छ। अवसर पाएको भए अझ राम्रो गर्नसक्ने कुरा गरिरहन्छन्। जीवनमा अाफ्नो खेल सुधार्न मदत गर्ने उति धेरै मान्छे नभेटेकोमा उनलाई नराम्रो लाग्छ। तरपनि एपिएफ र कुमार थापाप्रति उनी सदैव आभारी छन्।
'फुटबलपछि के त?' यो प्रश्नको जवाफ रावलसंग छैन। राम्रै अङ्कका साथ स्नातक उतीर्ण गरेका छन्। भन्छन्, 'सायद वैदेशिक यात्रामा लागिन्छ।' उनलाई इन्जिनियरिङ छोडेर फुटबलमा लागेकोमा रत्तिभर गुनासो छैन। तर पर्याप्त धन कमाउन नसकेकोमा भने बेलाबेला पीडा भइरहन्छ।
'सर्जियो बुस्केट्स फ्रम नेपाल'
यो लेखको टाइटल सुनेपछि रावल मन्द मुस्कान छोडेर सधैंको जस्तो आफ्नो भद्रता प्रस्तुत गर्छन्,
'थ्याङ्क यू हजुर!'